တရားဝင်အဖြစ်လူသိများမက္ကစီကို, "ယူနိုက်တက်မက္ကဆီကန်အမေရိကန်," တောင်ဘက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတည်ရှိပြီးဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နယ်စပ်င်း၏အနောက်နှင့်တောင်ပိုင်းနှစ်ဖက်အပေါ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ဘေလီဇ်, ဂွာတီမာလာနှင့်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်င်း၏အရှေ့တောင်ဘက်မှာမက္ကဆီကိုနယ်စပ်။ မက္ကဆီကိုပင်လယ်ကွေ့က၎င်း၏အရှေ့ပိုင်းအခြမ်းနယ်စပ်။ မက္ကစီကို 760,000 ကျော်စတုရန်းမိုင် (နှစ်သန်းနီးပါးစတုရန်းကီလိုမီတာ) ကိုဖုံးအုပ်ထားကြီးမားတဲ့မြေအကျယ်အဝန်းရှိပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအနောက်တိုင်းခြမ်းနှင့် 120th အကြီးဆုံးတိုင်းပြည်အတွင်းဆဋ္ဌမအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်အောင်သန်း 13 ကျော်ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေရှိတယ်။
မက္ကဆီကန်ကော်ပိုရိတ်ဆိုင်ရာဥပဒေများဟာသူတို့ရဲ့ 1993 ၏နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနှင့်မြောက်အမေရိကလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက် (NAFTA) တို့ပါဝင်သည်။ မက္ကစီကိုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဆီသို့အိတ်ဖွင့်တံခါးကိုမူဝါဒရှိပါတယ်။
• ထိရောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း: မက္ကစီကိုထည့်သွင်းဖို့ပြည့်စုံမှုလုပ်ငန်းစဉ်သုံးပတ်အထိကြာနိုင်ပါတယ်နေစဉ်, အရာအားလုံးမက္ကစီကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုဘဲပြည့်စုံစေနိုင်သည်။
• နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: နှစ်ခုသာရှယ်ယာရှင်များဟာမက္ကဆီကန်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကမည်သည့်နိုင်ငံကနေဖြစ်နိုင်ပြီးမက္ကဆီကို၏နေထိုင်သူများဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်: မက္ကစီကိုကော်ပိုရေးရှင်းမနိမ့်ဆုံးအခကြေးငွေ-up, မြို့တော်လိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားကော်ပိုရေးရှင်းကသူတို့မြို့တော်တန်ဖိုးကိုအဖြစ်န်းကျင် $ 3,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာကြေညာ။ ရသည်မှာ, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏မက္ကဆီကန်ပြည်သူ့ Registry ကိုကအနည်းဆုံး $ 3,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်နိမ့်ဆုံးကြေငြာတန်ဖိုးပိုမြန်ကုမ္ပဏီ၏ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်မှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ကိုလက်ခံပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကြေငြာမြို့တော်အမေရိကန်များအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေအောင်, အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားမက္ကဆီကန်ပီဆိုအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• အခမဲ့ Market က: နိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်မက္ကဆီကန်ကော်ပိုရေးရှင်းမက္ကဆီကိုနီးပါးတိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
• Dividends အပေါ်အဘယ်သူမျှမနှိမ်အခွန်: နိုင်ငံခြားခွဲဝေအပေါ် withholding အခွန်မကြာခဏမက္ကဆီကိုအတွက်သက်ညှာနိုင်ပါသည်။
• အဘယ်သူမျှမငွေကြေးစနစ်ချိန်းထိန်းချုပ်မှုများ: မက္ကစီကိုနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများအပေါ်ငွေကြေးလဲလှယ်ထိန်းချုပ်မှုစည်းကြပ်မထားဘူး။
• အဘယ်သူမျှမ Import / Export ထိန်းချုပ်မည်: အဆိုပါမက္ကဆီကန်အစိုးရနိုင်ငံခြားကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်နိုင်ငံခြားသွင်းကုန် / ပို့ကုန်ထိန်းချုပ်မှုစည်းကြပ်မထားဘူး။
နယူးကော်ပိုရေးရှင်းသည်အခြားမက္ကဆီကန်ကော်ပိုရေးရှင်းမှအလားတူမဟုတ်သောအရာတစ်ကော်ပိုရိတ် name ကိုရွေးချယ်ရမည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမက္ကစီကိုတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နာမတျော၏အသုံးပြုမှုကိုခွင့်။ တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုမှုကြောင့်နာမကိုအမှီတူညီမှပယ်ချခဲ့ပါကဤမျှတစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာဒါဟာသုံးကော်ပိုရေးရှင်း name ကိုရှေးခယျြစရာပူဇော်ရန်အကြံပြုသည်, တတိယ option ကိုပိုမြန်မှတ်ပုံတင်ဘို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့နာမအဘို့ခွင့်ပြုချက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနထံမှတဆင့်လာတစ်ကြိမ်အဆိုပါကုမ္ပဏီထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု Notary ပြည်သူ့မတိုင်မီရာအရပ်ကိုယူရမယ် ရေးရာ.
ကော်ပိုရေးရှင်းဒေသခံတစ်ဦးမှတ်ပုံတင်အေးဂျင့်ကိုခနျ့အပျရမယျ။ ထို့အပြင်ကော်ပိုရေးရှင်းတာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရန်ဒေသခံတစ်ဦးရုံးလိပ်စာရှိရမည်။ သို့သော်အဓိကကော်ပိုရေးရှင်းရုံးကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံးနှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များ 50 ရှယ်ယာရှင်များဦးရေအများဆုံးနှင့်အတူပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဘို့လိုအပ်သည်။ ရှယ်ယာရှင်များပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ခုဒါရိုက်တာတထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒါရိုက်တာများကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်အထွေထွေမန်နေဂျာဖြစ်စေကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုပြီးဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံ.
မက္ကဆီကန်ကော်ပိုရေးရှင်းခွင့်ပြုခဲ့ဖြတ်တောက်ပြီးနောက်သူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အပေါ် 30% တစ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်။
ကော်ပိုရေးရှင်း Hacienda (အခွန်ဖုံးအုပ်), နိုင်ငံတော် Registry ကို, (ကုမ္ပဏီ၏စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်အခြေခံပြီး) စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန, စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၏ကုန်သည်ကြီးများထံမှရရှိသောအစိုးရမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အခွန်ခွင့်လက်မှတ်ကိုဖုံးထားတဲ့ $ 1,500 အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဦးနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေးတစ်ခုတင်သွင်း / တင်ပို့မှုပေးဆောင် ပါမစ်, အဆစ်ကုဒ်ဒေတာအခြေစိုက်စခန်းခွင့်ပြုမိန့်နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန။
ကော်ပိုရေးရှင်းအဖြစ်လျာထားသောရှယ်ယာရှင်များကိုခနျ့အပျဖို့ရှေးခယျြပါလျှင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ပြည်သူ့မှတ်တမ်းများပုဂ္ဂလိကထားနိုင်ပြီး ဒါရိုက်တာများ။ ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ထဲဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ခုတည်းသောအများပြည်သူစံချိန်စာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း Surveillance တစ်ဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်လူသိများသည်အဘယ်အရာကိုခန့်အပ်ရပေမည်။ ဒါဟာဘုတ်အဖွဲ့နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောပြဌာန်းချက်စာရင်းစစ်၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာရင်းစစ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ရပ်တွေကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဒါရိုက်တာများနှင့် stockholders နှစ်ဦးစလုံး protected ဖြစ်ကြောင်းသေချာရပေမည်။
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာဒါရိုက်တာသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းသောစီမံအုပ်ချုပ်သူကိုဖြစ်စေသဖြင့်ပြင်ဆင်ရမယ်နှင့်နှစ်ပတ်လည် stockholder ရဲ့အစည်းအဝေးတွင်အတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်မဖြစ်မနေအသေးစိတ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း, ကုမ္ပဏီမူဝါဒများ, တည်ဆဲစီမံကိန်းများ, ကျောင်းအုပ်ကြီးစာရင်းကိုင်မူဝါဒများ, ဘဏ္ဍာရေးသတင်းအချက်အလက်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပုံတစ်ခုကြေငြာ, နှင့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာကုမ္ပဏီ၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေသရုပ်ပြတဲ့ကြေငြာနေစဉ်ကော်ပိုရေးရှင်းရဲ့တိုးတက်မှုကို ခုနှစ်.
ကော်ပိုရေးရှင်းတခုနှစ်ပတ်လည်ယေဘုယျအစည်းအဝေးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တို့ကထွက်ထားအရောင်းအများနှင့်ဘဏ္ဍာရေး MIC မှခွင့်ပြုသည့်ကော်ပိုရေးရှင်း, သို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲသူ၏အုပျခြုပျရေးအဖှဲ့နေသော stockholders ၏အစည်းအဝေးတစ်ခုရှိသေး၏။
3 ရက်သတ္တပတ်မှ4အကြောင်းကိုယူတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စဉ်ကိုမျှော်လင့်ထား။ ဤအချိန်စားပွဲပေါ်မှာအစိုးရကထံမှကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်အပေါ်မှာတည်လျက်ရှိ၏ဘယ်လောက်ပြည့်စုံပေါ်တွင်မူတည်သည်အဖြစ်အတည်ပြုချက်များအတွက် turnaround အချိန် registry ကို.
မက္ကဆီကန်ကော်ပိုရေးရှင်းနှစ်ခုသာရှယ်ယာရှင်များအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်ပေးဆောင်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်သက်တမ်းတိုးကြေး, မက္ကဆီကိုအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနီးပါးမည်သည့်အမျိုးအစား, တစ်ဦးပြားချပ်ချပ် 30% ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်လွတ်လပ်မှုကိုပူဇော်သည်အခွင့်အာဏာမြို့တော်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့အားဖြင့်သာတည်သည်ကို နှင့် privacy ကိုသာဆွဲသွင်းပါဝင်၏ဆောင်းပါးများအများပြည်သူစံချိန်နှင့်ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များကိုခနျ့အပျဖို့ option ကိုနှင့်ဒါရိုက်တာများစေရန်ရှိခြင်းအားဖြင့်ရရှိနေပါသည်